Tari-dàlana momba ny fanombohana ho an'ny fanamarinana Oracle Database | NY
Oracle Database Certification Complete Guide ho an'ny mpangataka
The Certificates of Oracle Database
1.Database Fampiharana fampiharana:
Mianatra ny lalana
Iray amin'ireo orinasa lehibe ao amin'ny orinasa IT eto amin'ny planeta, Oracle dia manana fepetra mihoatra ny 300 ho fanolorana. Ireo kilasy ireo dia avy amin'ny sokajy 9 miavaka ary mandrakotra sampana fahalalana, ao anatin'izany ny tahiry, ny rafitra, ny fampiharana, ny virtoaly, ny fitantanana ny governemanta ary ny hafa. Oracle Database Certification courses Mifantoka amin'ny vokatra, ny dingana, ny fitaovana ary ny zava-baovao izay natolotr'i Oracle ho an'ny mpividy azy manontolo, ary mikasa ny hanao talenta iray izay afaka mampiasa ny fanatitra Oracle amin'ny fahaiza-manaony sy tsotra.
Ny mari-pahaizana Oracle sy ny mari-pitsaboana momba ny angona tahirin-kevitra dia mirakitra ireo mari-pamantarana hafa Ny sokajy ankapobeny 3 izay ahafahana manangona ireo mari-pahaizana momba ny angona Oracle dia:
Ireo mari-pankasitrahana ireo dia manome fahafaham-po ny fahaiza-miasa amin'ny IT manokana amin'ny fandefasana ny safidin'ny Oracle fampiharana. Ireo mari-pankasitrahana mifandraika amin'ity sehatra ity dia ahitana:
● SQL sy PL / SQL: mifototra amin'ny fianarana ny fiteny SQL programming.
● Ny Oracle Application Express na ny Oracle APEX: manome ny fahafaha-manao momba ny fandaminana sy fanatsarana ny fandaharan-tena amin'ny fijerena ny programa, ny fitaovana izay azo ampiharina sy mora azo.
Ny fanolorana mari-pankasitrahana an'i Oracle dia manome laha-dianana izay hanampy anao bebe kokoa momba ny sain-kevitra misongadina misongadina mifandraika amin'ny teny SQL ary mampitombo ny hevi-pitenenanao. Ny fanamarinana 2 dia ireto:
● Ny fitantanana ny orinasan'ny SQL: manome ny aptitudes hita amin'ny fampivoarana ny tahiry sy ny fampiharana samihafa mifandraika aminy.
● Ny SQL Developer: ny asa vitanao eto dia ny fampandrosoana ny fomba fanoratana sy ny paikady fanoratana amin'ny tanjona izay ahafahanao manatsotra ny tatitra ho an'ny mpanjifa farany.
Ny tahiry Oracle dia malaza eran'izao tontolo izao. Ireo mari-pankasitrahana ireo dia manome fahafahana anao ho mpitsabo manokana amin'ny fanaraha-maso ny tahiry. Ny fanamarinana tsy manam-paharoa 4 dia mihodinkodina ato amin'ity sehatra fahaizana ity. Anisan'izany ireto:
● Oracle Database 12c: Ity mari-pankasitrahana ity dia manome ny fahombiazan'ny DBAs (Database Administrators) izay tena ilaina ary ilaina amin'ny fanaraha-maso ny tahiry Oracle amin'ny tolotra isan'andro. Mamporisika azy ireo hanangana, hampitombo ary hampihatra ny fanarenana sy ny fanamafisana. Ireo manam-pahaizana dia afaka miara-miasa amin'ny alalan'ny fampiasana ny tahiry multitenant sy pluggable.
● Oracle Database 11g: Ny fanomezan-dalana dia manome fahaiza-manao ho an'ny fitsaboana tsara ny tambajotra Oracle 11g azo antoka, azo antoka, azo ampiasaina ary mora ampiasaina, izay azo ampiasaina amin'ny asa be lavitra isan-karazany.
● Daty cloud: Ity dia mari-pamantarana maranitra fantatra amin'ny fitantanana ny Oracle databases.
● Oracle Spatial 11: Ny fanamarinana dia manome torolàlana sy fahaiza-manao ho an'ny fandinihana, fampidirana sy fitantanana ny angon-drakitra ara-barotra. Hatramin'izay dia mihoatra ny 80% ny fampahalalam-baovao azon'ny fikambanana ara-barotra azo omena fampahalalana ara-batana.
Ny mari-pamantarana Oracle dia omena amin'ny ambaratonga isan-karazany, ny Associate no tena ilaina. Ny hafa sy ny lehibe kokoa dia ny Profesora Master, Expert sy Specialist nivo. Tokony hanomboka amin'ny ambaratonga ambany indrindra ianao. Ireo mari-pankasitrahana ambony kokoa dia hanampy anao hanatsara ny fahaiza-manaonao, ary hampita anao koa ny fahaiza-manaonao misimisy kokoa, ny fianarana ary ny fanonerana.
Afaka miditra amin'ny Oracle oniversite antserasera amin'ny fandefasana ny mari-pahaizana momba ny mari-pandrefesana, raha misy ny institiota virtoaly hafa mifandray amin'ny Oracle ary voamarina fa manome anao ny tahirin-kevitra sy karazana karazana Oracle certifications koa. Ny mpanabe dia nitondra fiofanana fianarana mba hanome toky fa ny fianarana sy ny fahaiza-manao rehetra tokony ho vitanao hitarika ny mari-pahaizana amin'ny ezaka sy amin'ny fotoana. Ny fitaovam-pianarana dia azo ekena ihany koa ary tokony hianatra azy ireo hamaly ny fanontaniana ianao rehefa mandalo ny valiny farany amin'ny valin'ny fitsapana fanamarinana Oracle Database.
Mifanaraka amin'ny karazam-panomezana nomena anao ny baiko, dia hanana ny fahalalana ilaina momba ny fitantanana ny Oracle databases. The angona dia azo ampiasaina amin'ny latsabato, ambany, ary ambony. Ny fanamarinana sy ny fahazoan-dàlana dia hanaiky ny fahaiza-manaonao sy ny fampahalalam-baovao ary mety indrindra amin'ny fampandrosoana ny asa raha toa ka manana traikefa an-tanana sy tena izy koa ianao. Ny fanamarinana dia hanampy ny orinasa hahita fahombiazana ny fahaiza-manaonao ary hahatonga anao ho tonga haingana.